ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ဦး Younger တို့အချင်းမိန်းမချိန်းတွေ့အကောင်းအဆိုး Cons
တစ်ဦး Younger တို့အချင်းမိန်းမချိန်းတွေ့အကောင်းအဆိုး Cons
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 16 2021 |2မိဖတ်ပြီးသား
မကြာသေးမီက စစ်တမ်း ယောက်ျားမသက်ဆိုင်ဘဲမူလသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်သူတို့ရဲ့နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အသက် 20 အရွယ်အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ချင်သောအကြံပြု. စစ်တမ်း၏တွေ့ရှိချက်တွေဟာယုံကြည်ရဆိုရင်, သူတို့ရဲ့ 40s ပင်သက်ကြီးယောက်ျား, 50့, သို့မဟုတ် 60 ရက်စွဲအမျိုးသမီးများသူတို့ကိုထက်မျ​​ားစွာငယ်ရွယ်သောကြိုက်တတ်တဲ့.
လူ့အဖွဲ့အစည်းအဟောင်းတွေလူနှင့်အငယ်အမျိုးသမီးများအကြားဆက်ဆံရေးကိုလက်မခံခဲ့တဲ့အချိန်မှာအချိန်ရှိ၏; သို့သော်, ယခုအမှုအရာသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီးယင်းကဲ့သို့ဆက်ဆံရေးကိုတော်တော်လေးဘုံဖြစ်ကြပါပြီ. ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးကိုခန့်အရာအားလုံးမကောင်းမသင့်ဖြစ်၏နေစဉ်, သူတို့တစ်ခုခုလုံးဝမဆိုးများမှာ. အောက်တွင်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့အချို့အကောင်းအဆိုး cons ကိုစူးစမ်း.
ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး, သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်, များသောအားဖြင့်နည်းပါးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်စည်စလယ်နှင့်အတူလာ. အဟောင်းတွေအမျိုးသမီးများ, သို့သော်ငြားလည်း, မကြာခဏအသက်တာ၌ပိုမိုအတက်အကျခံယူ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်သူတို့၏ပျော့ပျောင်းသောစေတနာဆုံးရှုံး. အသက်ကြီးသူတွေမှာသူတို့ကိုမျှော် refresh နိုင်သူချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေဤသို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်ကြသူအမျိုးသမီးများအတွက်မရှိသလောက်စိတ်ဝင်စားကြ.
ယောက်ျားအိုမင်းအဖြစ်, သူတို့နည်းပါးစွန့်စားဖြစ်လာလေ့. ဒီသူတို့ကတကယ်တော့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာထက်အများကြီးအသက်ကြီးတဲ့စေတယ်. အများကြီးအသက်ငယ်သောသူသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူဖြစ်ခြင်းလူသည်မိမိပျောက်ဆုံး zest ပြန်ရရှိရန်နှင့်ပြည့်အဝအားအသက်အသက်ရှင်ရန်လုံလောက်သောစွမ်းအင်ရရှိကူညီပေးနိုင်တယ်; ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးတက်ကြွဤလူတို့အဘို့အအံ့ဘွယ်သောအမှုလုပ်ကိုင်ဖို့ဟန်.
ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့မကြာခဏတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ရှုထောင့်ကနေကမ္ဘာ့ကြည့်ဖို့ယောက်ျားအထောက်အကူပြု. အသက်ကြီးသူတွေမှာမကြာခဏသူတို့လုံလောက်တဲ့မြင်ကြပြီယုံကြည်စတင်. ဤလူတို့ကိုအမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုထက်မျ​​ားစွာငယ်ရွယ်သောချိန်းတွေ့ခြင်းစတင်လာတဲ့အခါ, သူတို့အနေနဲ့လုံးဝလတ်ဆတ်တဲ့အလားအလာဖွံ့ဖြိုးရန်ရှေးရှု. သူတို့ကပင်သူတို့ရှေ့မှာကျင့်ကြပြီမဟုတ်သောအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းငှါ, START.
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဟောင်းတွေလာသောအခါရင့်ကျက်သောဉာဏ်ပညာနှင့်သာလာနိုင်သည်; ကြေညာချက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်စစ်မှန်တဲ့အတိုကောက်. ဒါဟာအတုအဲဒီနှစ်ခုအရည်အသွေးတွေကိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး. မကြာခဏကနဦးမီးပွားတစ်ခုအသက်ကြီးသောသူကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုကျော်သည်နှင့်တစ်ဦးအငယ်သောမိန်းမကြောင့်နာက်အတွက်ရင့်ကျက်နဲ့ဉာဏ်ပညာကင်းမဲ့မှုမှသိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးနောက်.
သင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ဆက်ဆံရေးသို့ရရင်သင်ထက်မျ​​ားစွာငယ်ရွယ်သော, သင်ကခက်ခဲသည်မိမိမြင့် sex drive လိင်စိတ်ကြောင့်အိပ်ရာပေါ်မှာသူမရဲ့ပျော်ရွှင်စေခြင်းငှါရှာတွေ့စေခြင်းငှါ,. ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်များစွာသောမိန်းမအခြားလိင်မိတ်ဖက်ရှာနေစတင်. ဤသို့ပြုအားဖြင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပေမဲ့, ထိုလူအဘို့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ဤအလေ့အကျင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲသူ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွါး.
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုထက်မျ​​ားစွာငယ်ရွယ်သော, ယောက်ျားတို့သည်လည်းဆင်းဖြေရှင်းနှင့်မိသားစုထူထေ​​ာင်ရာတွင်အကျိုးစီးပွားသူမ၏မရှိခြင်းကြောင့်နှောင့်အယှက်စေခြင်းငှါ. ယနေ့တွင်, အများစုကသူတို့နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အသက် 20 အရွယ်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်ဘဝကိုပျော်မွေ့ရန်ဆင်းရဲထက်ငယ်ရွယ်သော, ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်အကိုင်များကိုရှိသည်, ဆင်းဖြေရှင်းမီငွေတွေအများကြီးရ. တော့ဘူးကြောင့်ငယ်ရွယ်မဟုတ်သူတစ်ဦးသည်လူအဖြစ်, တကျိန်းသေတစ်မိသားစုမစတင်မီသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဤမျှလောက်အချိန်ပေးရန်အလွန်လွယ်ကူရှာမလို.
အခြားမည်သည့်ဆက်ဆံရေးလိုပဲ, သက်ကြီးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားဆက်ဆံရေးကိုအငယ်ကလည်းသူတို့ရဲ့အရည်အသွေးနဲ့အကုသိုလ်ရှိသည်. ဒါကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးကိုအောင်မြင်တဲ့လုပ်နှစ်ခုစလုံးမိတ်ဖက်အချင်းချင်းကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်စီနှင့်အခြားနှင့်သဟဇာတဖြစ်ရပါမည်.
ခွေးများ Love ဖြစ်ရမည် : Life တွင်နယူး Leash
3 အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Profile ကို Creating ကြီးသောအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
ကိုယ်တော်၏ Type နေရာမှာမဟုတ်သူတစ်ယောက်ချိန်းတွေ့ကြိုးစားသင့်အဘယ်ကြောင့်